Paz Castelló. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enwe ọmịiko | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Novela, ọtụtụ
Foto: Paz Castelló na ebe nrụọrụ weebụ.
Paz Castello, onye edemede si Alicante nke nọrọ ogologo oge na ụwa nkwukọrịta, na-ewetara akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ nke isiokwu ya Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enwe ọmịiko. Ọ malitere ibipụta akwụkwọ na 2013 na Ọnwụ nke 9. Utu aha ndi ozo bu E dere aha m n'ọnụ ụzọ ụlọ mposi, Ọnwa iri na asatọ na otu ụbọchị y Igodo 104. na Daalụ nke ukwuu oge ị raara nye m maka nke a Ajụjụ ọnụ ebe ọ na-agwa anyị gbasara akwụkwọ ọhụụ ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ.
Paz Castelló - Ajụjụ ọnụ
NKWUKWU: Akwụkwọ ọhụrụ gị bụ Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enwe ọmịiko. Kedu ihe ị gwara anyị n'ime ya?
PAZ CASTELLỌ: En Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enwe ọmịiko (Mbipụta B) akụkọ akụkọ banyere Camila na Nora, nke nwere ike ịpụta na mbụ ụmụ nwanyị abụọ dị nnọọ iche site na afọ na ọnọdụ dị mkpa, mana ọ ga - achọpụta n'oge na - adịghị anya na ha nwere ihe jikọrọ ha: na abụọ Ndị nke oge ochie jiri ha mee ihe ma ugbu a ha anaghị atụ egwu ịbịakwute ha, na-eme mkpebi ndị metụtara ndụ ha. Camila bụ nwanyị tozuru etozu nke kpebiri ikewapụ di ya. Nke a na - eme ka ya nwee nkwekọrịta ịgba alụkwaghịm na - enyo enyo maka ya.
Ka ọ na-enyocha ebumnuche zoro ezo nke onye ọlụlụ mbụ ya, ọ zutere Nora, nwa akwụkwọ na-eto eto, nke dị afọ iri abụọ karịa ya, onye na-edebe ihe nzuzo dị egwu kemgbe ọtụtụ afọ na onye bịara Alicante na-achọ ịbọ ọbọ. N'etiti Camila na Nora mmekọrịta pụrụ iche pụrụ iche na ndo nke thriller, ma na-enwe mmetụta nke anụ ahụ ruo n’elu ala. Bụ a akụkọ banyere nwanne na inye ike ụmụ nwanyị, buru ibu ihe omimi di omimi di omimi.
AL: Can nwere ike ịlaghachi n’icheta akwụkwọ mbụ ị gụrụ?
PC: Echere m na m na-echeta nke ahụ akpọrọ aha Akụkọ Gold. Enweghị m ike ịgwa gị onye edemede. Ọ bụ otu nchịkọta akụkọ nwetụrụ ụkpụrụ ọma mana oge. Nna m zụtara m ya n'ahịa ure. Ihe ndị mgbe ochie masịrị ya nke ukwuu. Ọ bụ na mmalite nke iri asaa na mgbe ahụ ọ bụ akwụkwọ ochie. M chetakwa na ọ zụrụ m Moby Dick, ma m gụrụ ya ma emechaa.
AL: Na akụkọ mbụ ị dere?
PC: Ihe mbụ m dere bụ poems. Kemgbe m dị obere, amalitere m ịgụ ihe ebube ike ahụkwara m ya n'anya. Echere m, n'ụzọ ụfọdụ, m na-anwa i toomi ya.
PC: Mgbe m dị afọ iri na abụọ, m gụrụ Ifufe owuwa anyanwu, ifufe nke ọdịda anyanwụ, na Pearl S. Buck. O gosipụtara m nke ukwuu n'ihi na site na akwụkwọ na n'oge m bụ nwata, achọpụtara m ọdịbendị ọzọ, ụzọ ọzọ iche echiche na ịghọta ụwa. Omenala ọdịnala nke China na echiche ọdịda anyanwụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ na-eju m anya. Karịsịa ọrụ ụmụ nwanyị na obodo dị iche iche.
AL: Onye edemede kachasị amasị gị? Nwere ike ịbụ karịa otu na oge niile.
PC: Aga m anọnyere Agatha Christie, maka ụdị o dere na maka ịbụ a na-asụ ụzọ na ezigbo nwanyị iconic. O doro anya na e nwere ọtụtụ ndị edemede na-adọrọ mmasị m, mana ebe ọ bụ na ịkpọtụrụ ha niile ga-abụ ihe na-ezighị ezi nye ọtụtụ ndị ọzọ, a hapụrụ m nwanyị ukwu nke ihe omimi.
PC: O siri ike ịhọrọ, mana ọ na-abata n’uche dịka ọmụmaatụ, Obere Onye isi. Dị ka nwatakịrị, m gaara achọ ka ọ bụrụ eziokwu. Ọ bụ ihe dị ka ezigbo enyi. Ọzọkwa Alicia nke Lewis Carroll dere. Ma ndepụta ga-adị enweghị njedebe.
PC: Naanị abụọ: ịgbachi nkịtị na uwe dị mma. Site ebe ahụ njem amalite.
PC: Ekwesịrị m ide n'ụlọ. Amaghị m otu esi elekwasị anya n’ebe ọzọ. Onwere ndị na-ede akwụkwọ n’ọ́bá akwụkwọ ma ọ bụ ọbụna ụlọ ahịa kọfị. Achọrọ m ịnọ naanị na ịdị jụụ. Maka m ọ bụ ụdị ọnọdụ ọhụụ nke achọrọ m itinye uche m.
PC: Ọkacha mmasị m bụ thriller mana m guru ihe niile. Ihe m na-aju bu na o buru ezigbo akụkọ ma kwukwa ya nke ọma. Mu bukwa onye agu abu na Teatro.
PC: Ikpeazụ nke Trilogy Blas Ruiz-Grau, Not gaghị anwụ. Abụ m agwụcha akwụkwọ ọgụgụ. Ndị ọzọ noir ụlọ ya na okwu a na-ekpo oke ọkụ. Ruo ugbu a enwere m ike ịgụta.
AL: Olee otu i chere ọnọdụ mbipụta akwụkwọ ahụ dị? Ole akwụkwọ, ọtụtụ ndị ode akwụkwọ?
PC: Ọ bụ ụwa siri ike ma sie ike. Oke asọmpi na obere oge ebe iwu ahịa na-adị ike mgbe ụfọdụ karịa ndị edemede. M na-agbalị ịgbanahụ nke ike ahụ mgbe ụfọdụ na-agba gburugburu mpaghara ahụ na gbado anya n'ide ezigbo akwụkwọ. Abụ m onye edemede, nke ahụ bụ ọrụ m. Ihe ndị ọzọ niile karịrị akarị m.
Echere m na ọ dịla mgbe ndị mmadụ na-ede ihe, naanị na ịntanetị emeela ka anyị pụta ìhè. Na njedebe ọ na-eme mgbe niile ụfọdụ itule n'etiti ọkọnọ na ina, dị ka na mpaghara ọ bụla ọzọ. Nke a apụtaghị na ọ dị mma nakwa na mmebi ahụ anaghị eme.
PC: Onwe m, nsogbu a na-eweta ọgaranya. N'ụzọ dị mma, ahụike na-asọpụrụ anyị. Ana m agbalị mgbe niile iwepụ ihe ndị dị mma n’ọnọdụ ndị tara akpụ. Na njedebe nke ụbọchị, ọ bụ ụzọ anyị ga-esi gbanwee ihe. Otú ọ dị, echeghị m na m ga-eji ya na akwụkwọ m na-ede. Enwere m echiche na Ọ na-ewe oge na anya maka ndabere nke ihe anyị mụtara n'ime ma nyere anyị aka ịmepụta ihe. Ana m etinyekwu ya na ọkwa onwe m. Ana m ekele kwa ụbọchị maka ihe ọma niile ndụ na-enye m. Enwere m obere ihe karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Paz Castelló. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enwe ọmịiko